म,दिराले मा’तेका युवाले प्रहरी सहायक निरिक्षकका तीन दाँत भाँ,’चि,दिए! – Taja Khawar
म,दिराले मा’तेका युवाले प्रहरी सहायक निरिक्षकका तीन दाँत भाँ,’चि,दिए!
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ३१, २०७८ समय: १४:४४:४९
रुकुम पश्चिममा युवाको आ,x क्र,x म,x ण,x मा परि एक प्रहरी सहायक निरिक्षकसहित सात प्रहरी घा’इते भएका छन् ।म,दिराले मा’तेका युवालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीलाई युवाको स’मुहले ढुं’x गा,x मु,x ढा गरेको थियो ।
युवाको ढुं,x गा प्र’xहाx रx बाट प्रहरी सहायक निरिक्षक कोमलराज बोहरा, हवल्दार कालिबहादुर बोहरा र प्रहरी जवान लक्षमण गुरुङ घा’इते भएका छन् ।
यी बाहेक अन्य अन्य चार जना प्रहरी जवान समान्ने घा’इते भएको जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता प्रहरी निरिक्षक कपिलजंग शाहले जानकारी दिए ।
घा’इते बोहरालाई शुक्रबार राति नै रुकुम पश्चिममा प्रारम्भीक उपचार पछि थप उपचारका लागि बाँकेस्थित कोहलपुर मेडिलक कलेजमा उपचारमा लगिएको थियो ।
त्यहाँपनि उपचार संभव नभएपछि थप उपचारका लागि शनिबार प्लेन मार्फत काठमाडौं लगिएको जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता शाहले बताए ।
युवाहरुको ढुँगा आ,x क्र,x म,x ण,x बाट बोहराको टाउकोमा गहिरो चो’ट लागेको छ । त्यस्तै तल पट्टीको तीन वटा दाँत झ,xरे,x को तथा माथि पट्टीको एउटा दाँत हxx ’ल्लिx एx को शाहले बताए ।
युवाको आ,x क्र,x म,x ण,x बाट प्रहरी हवल्दार कालिबहादुर बोहराको दाहिने हातको बुढी औलामा, ढाडमा र प्रहरी जवान लक्षमण गुरुङलाई टाउकोमा सामान्ने चो’ट लागेको शाहले जानकारी दिए ।
झापामा एक महिलाले अर्कैको श्रीमान लिएर भागेकी छिन । स्थानियका अनुसार दाजु बहिनीको सम्बन्ध बानाएकाले खासै आफुहरुले वास्ता नगरेको जनाएका छन । ती महिला डिभोर्स गरेर बसेकी थिइन भने ती पुरुष भने बिबाहित हुन ।
उनका दुई सन्तान रहेको स्थानीयले बताएका छन । गत जेठ देखि नै उनिहरु सगैँ काम गर्ने गरेको उनिहरुको भनाई रहेको छ । तर त्यस्तो केही आशंका गर्ने खालको उनिहरुको कुनै पनि सम्बन्ध आफुहरुले कहिल्यै नदेखेको उनिहरुको भनाई छ ।
ताप्लेजुङ घर भएकी लगभग ३५ वर्षीय सबिना गुरुङ गत जेठमा झापाको चिया बगानमा काम गर्नका लागि आएकी थिइन । चिया बगानमा ति महिला सगैँ अन्य थुप्रै काम गर्थे । सबिना सगैँ फरार भएका ४५ वर्षीय सुमन तामाङ पनि सोही बगानमा काम गर्थे ।
उनिहरुसगैँ सुमनकी श्रीमती लगायत अन्य थुप्रै स्थानिय र सुनमका छिमेकीहरु पनि त्यही काम गर्थे । त्यहा सबैसगँ राम्रो सम्बन्ध रहेकी उनले सुमनलाई दाइ मानेको पनि स्थानियले बताएका छन । सुमनकि श्रीमतिसगँ पनि उनको सम्बन्ध राम्रो थियो ।
तर गत भदौको तिज देखि नै उनिहरुबिच सम्बन्ध रहेको भन्ने अहिले थाहा पाएको स्थानियको भनाई छ । सबिनाका श्रीमान भने वैदेशिक रोजगारीमा बिदेशमा रहेको जानकारी उनले चिया बगानमा काम गर्न आउदा बताएकी थिइन ।
तर स्थानीयका अनुसार भने गत भदौ तिर उनका श्रीमान घर आएको र उनिसगँ डिभोर्स गरेको भनाई छ । त्यस पछि भने सबिनाको सम्बन्ध सुमनसगँ भएको स्थानियहरुको भनाई छ । सोझो र इमानदार सुमन र सबिना खासै बोलचाल गरेको आफुहरुले थाहा नपाएको भनाई छ
Last Updated on: October 17th, 2021 at 2:44 pm